Soomaaliya, 30 December 2019
Isniin 30 December 2019
Qaar ka mid ah dadkii lagu la'aa qaraxii Ex-Control oo la helay
Guddiga Gurmadka ee la sameeyey kadib qaraxii sabtidii ka dhacay Muqdisho ayaa sheegay in 24 qof oo la la’aa la xaqiijiyey in shan ka mid ah ay ku dhinteen qaraxii dhacay, halka qof kale uu dhaawac soo gaaray, lix kalena la helay iyaga oo bed-qaba.
Barnaamij gaar ah: Dhacdooyinka 2019 ee Soomaaliya
Sharciga doorashooyinka Somalia ma waafaqsan yahay dastuurka?
Khasaaraha Qaraxii Muqdisho oo Kordhay
Waxaa kordhaya tirada dadka ku geeriyooday qaraxii shalay ka dhacay isgoyska Ex-control Afgooye ee magaalada Muqdisho. Madaxa Isbitaalka Madiina Dr. Maxamed Yuusuf ayaa sheegay in meydka isbitaalkooda la gaarsiiyey ay gaareyso 81 qof.
Ururka Ahlusunna oo ku Baaqay Dagaal lala Galo Al-Shabaab
Dowladda Turkey oo Dad Dhaawac ah u Qaadday Dalkeeda
Diyaarad millatari oo ay leedahay dowladda Turkiga ayaa maanta gaartay magaalada Muqdisho iyadoo halkaasi ka qaadday 16 qof oo ka mid ah dadka ay soo gaareen dhaawacyada halista ah ee ku dhaawacmay qaraxii wuxuushnimada ahaa ee shalay lala beegsaday isgoyska Ex-Control Afgooye ee magaalada Muqdisho.
Wararkii ugu Danbeeyey ee Qaraxii Muqdisho
Wararka ka imanaya Magaalada Muqdisho ayaa sheegaya in in ka badan 80 qof oo u badan shacab ay ku geeriyoodeen qarax xooggan oo saaka lala beegsaday Ex-control Afgooye oo ka mid ah baraha laga soo galo magaalada Muqdisho.
Khasaaraha Qaraxii ka Dhacay Muqdisho
Inta la xaqiijiyay 80 qof ayaa ku dhintay qarax aad u culus oo saakay ka dhacay isgoyska ex-control Afgooye ee magaalada Muqdisho. Qaraxan oo ahaa gaari walxaha qaraxa laga soo buuxiyay ayaa lagu dhex qarxiyay bar kontorool oo aad u mashquul badan
Faafaahinta Qaraxii Ex-control Muqdisho
In ka badan 76 qof ayaa la xaqiijiyey in ay ku geeriyoodeen qarax aad u culus oo maanta oo Sabti ah ka dhacay isgoyska Ex-control Afgooye ee magaalada Muqdisho.